Maxaa isbeddel ku dhaca gabdhaha waqtiga uurka?
Caafimaadka dumarka Uurka
Uurku waa nidaam la yaab leh, marka jiritaanka jirka ee adag ee unugyada yar yar ka samaysan yahay, waxay ku qaadataa muuqaalka wajiga sida waalidkeeda, waxay ogyihiin sida loo muujiyo dareenkooda iyo u sheegaan waalidkooda wixii ku saabsan baahidooda.
Si loo hubiyo in nidaamka horumarinta intrauterine aan la dhibin oo la marin line line, dhammaan nidaamyada hooyada mustaqbalka waxay bilaabaan inay la shaqeeyaan laba jeer, tan iyo uurjiifku u baahan yahay inuu abuuro xaalado wanaagsan oo horumar ah, bixinta nafaqada iyo ogsijiinka. Laakiin isbeddeladu maaha kuwo kaliya oo leh unug yar oo yar, laakiin hooyadiis. Aynu aragno isbeddelka ku dhaca gabdhaha xilliga uurka.
Maalinta labaad - usbuuca saddexaad ee uurka, marka loo arko in uu yimid, iyo ukunta uurjiifka ah ayaa lagu go'aaminayaa xuddunta uterineine, jidhka hooyadu wuxuu soo saaraa hoormoonyo ka ilaaliya dhiciska. Marxaladdan, asalka hormoonka ee haweeneyda uurka leh ayaa si isdabajoog ah u baddala, taas oo keenta jirro subaxnimo, isbeddelo isdaba joog ah oo ku yimaada niyadda, niyadjabnimada, iyo madax-furasho. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in sunta sunta ay tahay calaamad muujineysa inaad u adkeysan karto cunugga dhibaato la'aan, dhalashaduna waxay ku guulaysan doontaa. In kasta oo xaqiiqda ah in helitaanka noocan oo kale ah hubaal, gabdhaha uurka leh badankood, mararka qaarkood xitaa kama bixi karaan waqti dheer guriga, maadaama ay si joogto ah u silciyaan lalabbo. Laakiin sunta sunta ah ma aha mid weligeed ah iyo bisha saddexaad ee hormoonnada jidhka ee caadiga ah waxqabadka.
Mid ka mid ah calaamadaha ugu muuqda ee uurku waa miisaanka koritaanka, laakiin ha argagixin, maaddaama tani ay tahay habka jireed ee hubiya horumarka caadiga ah ee ilmahaaga. Xilliga uurka oo dhan haweeney qiyaastii 10-13 kg oo miisaankeedu yahay 4-4.5 kg waa culeyska uur-jiifka, dheecaanka amniotic, mandheerta, xuubka amniotic, 1-1,5 waa kan weyn ee ilmo-galeenka iyo naaska, 1.5 kg oo dhiig ah , 1 kg oo dheecaan dhexdhexaad ah iyo kordhinta baruurta ee hooyada - 4 kg, kaas oo siinaya ilmaha caanaha mustaqbalka. Waa in la ogaadaa in sigaar cabidda iyo cabbitaanka miisaanka gabdhuhu ay ka sii daraan, ilmaha yar yarna way yar yihiin iyo difaac yaraanta. Sidaa daraadeed, hooyooyinka mustaqbalka, waxaa haboon in ay tixgeliyaan habka noloshaada.
Jirka yar ee jidhka hooyada wuxuu u baahan yahay oksijiin kasta laba jeer, sidaa daraadeed gabadha uurka leh waxay u kordheysaa hormoonka hormoonka, hormarinta nasinta dheeriga ah ee muruqyada derbiyada bronchi iyo kordhinta marinada hawada. Dhammaan tani waxay kordhineysaa tirada hawada neefta ah ee ay hooyadu ku neefsanayso 40%, taas oo 30% ay uureysey uurjiifka lafteeda, 10% ka harayna waxaa la cunay nidaamyada noolaha haweenka uurka leh.
Wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Xaddiga ugu weyn ee uurku wuxuu ku dhacaa nidaamka wadnaha, sababtoo ah garaaca wadnaha oo degdeg ah, hindhisada bidix ee fardaha iyo korodhka mugga daqiiqad, dhammaan walxaha lagama maarmaanka ah waxaa la geeyaa ilmo-galeenka. Marka lagu daro in la xoojiyo garaaca wadnaha, uurku wuxuu kordhiyaa mugga dhiigga ugu badnaan hal jeer iyo badh, taas oo tan la xidhiidha, inta badan gabdhaha xaaladdoodu jirto waxaa sii kordhaya murqaha dhiigga. Cadaadiska qanjirada 18ka toddobaad ee ugu horeeya waa yaraa, sababtoo ah haweeneyda uurka leh waxay dareemi kartaa tabar darro iyo murugo. Marka la gaaro bartamaha saddexaad ee labaad, kororka cadaadiska 10 mm ayaa la arkay. gt; Art. Kaddib marka dhalmada, xaaladda cadaadiska waa mid caadi ah. Laakiin waxaa muhiim ah in la ilaaliyo cadaadiska inta lagu jiro mudada gesting, sababtoo ah baaxada sare waxay dhalin kartaa ilmo dhicis ama dhalmo qaangaar ah.
Uurka wuxuu u baahan yahay waxtarka ugu sarreeya ee dhaqdhaqaaqa hooyada, sidaa daraadeed maaha mid la yaab leh in haweenku ay leeyihiin haemogaraamis, dhowr lakaboos, hemoglobin iyo plasma. Dhamaadka uurka, wadarta dhiigga oo dhan wuxuu kordhiyaa 40%. Iyadoo uur leh jirka, waxaa jira isbeddel ku yimaada qaabka dhiiga, isbeddel ku yimaadda dheelitirka acid-saldhigga. Haddii nidaamyada habsocodka uurku caadi u yahay oo ay leeyihiin awood ku filan, markaa ma jiro wax qaxaya oo gaar ah oo ka mid ah PH.
Nidaamka lafaha iyo muruqyada.
Inta lagu jiro xilliga uurka, jirka wuxuu u diyaariyaa dhalmada waxaana uu soo saaraa hoormoon sida nasashada, oo mas'uul ka ah kala-saarista ammaanka ee xubnaha iyo muruqyada marxalad guul ah ee uur-kujirka. Marka la eego, sadexdii bilood ee ugu dambeysay, haween uur leh waxay dareemi kartaa kororka dhaqdhaqaaqa dhexdhexaadinta, mararka qaarkood waxaa jira xanuuno rheumatic ah oo gacmaha, jilbaha iyo suxullada. Wax kasta waa wax caadi ah markii la dhasho.
Maqaarka haweeneyda uurka leh ayaa sidoo kale la baadhi karaa, taas oo isbeddellada wayni ay dhacaan. Marka la gaaro bartamaha seddexaad, haweeneydu waxay u ekaan kartaa muuqaalka wajiga tiro badan oo lafdhabarta ah, xariiqda xuddunta illaa baraha ayaa madow, waxayna noqotaa midab madow, oo hoos u dhigto ibta. Isbeddelada noocan oo kale ah waxay sabab u tahay xaqiiqda ah qanjidhada adrenal waxay soo saaraan midab u eg melanin. Ku dhawaad ​​mudada dhalashada, waa weyn ilmo-galeenka, taas oo keenta in uu sii faafo maqaarka caloosha iyo dhabarka. Haddii maqaarka haweeneyda uurka leh uu leeyahay borotiin wanaagsan oo wanaagsan sida elastin, striae oo ka soo baxda xilliga uurka waxay si dhakhso ah u baaba'eysaa dhalmada kadib. Haddii borotiinku uusan ku filneyn markaas, nasiib daro, calaamaduhu waxay u muuqdaan kuwo muuqda inta ay noolyihiin oo dhan.
Mid ka mid ah daqiiqadaha aan fiicneyn ee uurka waxay ku xiran tahay musqusha. Ilmihii saddexaad ee ugu danbeeya ilmo-galeenka ayaa horeyba ku filan oo u faafay kaadiheysta haweeneyda uurka leh. Muddada dheer, muddada dheer, cadaadiska badan ee keena kaadida inta badan. Tan iyo kelyuhu ma dhaqaajin karaan dhammaan dareeraha jidhka hooyada mustaqbalka, haween badani waxay qabaan barar. Xaaladaha noocaas ah, waxaa lagama maarmaan ah in la nadiifiyo heerka dareeraha la isticmaalo maalin kasta oo laga saaro dheecaannada iyo diyaarinta.
Gabar kasta oo uur leh waxay leedahay isbeddel ku yimaada doorashooyinka dhadhanka. Badanaa, waxa ay jeceshahay ka hor intaan uur la qaadin waqtigaan waa la neceb yahay iyada, iyada ayaana dooraneysa cuntooyinka aan hore u cunin. Laakiin waa inaad fiiro gaar ah u leedahay xaqiiqda ah in ay jirto haween uur leh, sababtoo ah cuntadeeda waxay door weyn ka qaadataa sameynta ilmaha. Laga soo bilaabo nafaqada waxaa lagama maarmaan ah in laga reebo cuntada dufanka leh, dhir udgoon, nooc kasta oo ah cunto fudud iyo macmacaan. Cuntadiisu waa inay ahaato miraha, miraha, hilibka, alaabta caanaha, khudradda, cagaarka iyo digirta!
Sidaas, sida aad u aragto, isbedelka ku dhaca gabdhaha waqtiga uurka. Dumarka haweeneyda uurka leh waxay ku dhacdaa culeysyo culus iyo isbeddel, laakiin wali waa haween la jecel yahay, la doonayo iyo qurux.
Tabar-darrada muruqyada sagxada miskaha
Yaa iyo sida loola hadlo uurka?
Maxaa sababa taranka ilmo-galeenka muddada uurka?
Kala saarida ugu dambeyn saddexda bilood ee uurka
Caadada ayaa sii socon kara bilaha ugu horreeya ee uurka
Meelkee ayaa ugu fiican uur qaadidda ilmaha?
Cadaadiska dhiigga ee hooseeya ee uurka
Sababaha looga hortago helitaanka shaqo wanaagsan oo ku sii jir
Roob ama baraf: waxa dhici doona 2015
Salad Giriig ah oo leh baasto
Cirridka lugaha: daawooyinka dadweynaha
Baaritaanka dumarka uurka leh si loo ogaado cilladaha koromosoomyada ee uurjiifka, baaritaanka dhalmada kahor
Sida loo doorto dhinaca midigta dhinaca dhinaca midigta: 4 xeerarkan ayaa ka caawin doona inaysan qaldanayn!
Nooc kasta oo dahab ah
Drumstick ee Turkiga leh toon iyo jajab
U diyaargarowga gu'ga horay: mawjada casriga ah ee 2014
Waa maxay budada?
Qalafka qolka ka soo jeedda aragtida maskaxda
Dumarka ugu fiican ayaa daawanaya
Fiiri leh isteroberi
Bil kasta uurka kadib
Sida loo isticmaalo wakhtiga firaaqada oo faa'iido leh
Jimicsiyada loogu talagalay socod baradka da'doodu tahay 8-16 isbuuc: adoo dhabarka, garbaha iyo gacmaha